မလိုအပ်ဘဲ ဆေးထိုးတာကောင်းလား - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ » မလိုအပ်ဘဲ ဆေးထိုးတာကောင်းလား
ရေးသားသူ Dr. Seinn Moe Satt ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win.
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက လူနာတော်တော်များများ ဆေးရုံဆေးခန်းသွားတဲ့အခါ…. မကြာမကြာပြောလေ့ရှိတာကတော့…. “ဆရာ.. ကျွန်တော်ခေါင်းမူးလို့ အကြောဆေးသွင်းချင်လို့” “ကျွန်မအားနည်းနေလို့ ဆလိုင်းချိတ်ပေးပါ” “ကျွန်တော်က တစ်လတစ်ခါ အကြောဆေးသွင်းနေကျ… မသွင်းရင် နေမကောင်းဘူး… ခု ဆေးသွင်းဖို့ ရက်ပြည့်နေပြီ ဆိုတော့ လုပ်ပေးပါဦးဆရာ” …. ဒီလိုတွေ ပြောပြီး အကြောဆေးသွင်းပေးဖို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို တောင်းဆိုလေ့ရှိကြပါတယ်…
ဆေးအနီလေးတွေ… အ၀ါလေးတွေ အကြောထဲဝင်သွားတာ… ပုလင်းကြီးထဲကဆေးရည်တွေ တစက်စက်ကျတာကို မြင်နေ ရရင်ပဲ သဘောကျကြသူအများသား။ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲရင် အကြောဆေးထိုး… ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်ရင် အကြောဆေးထိုး ကြ… အိပ်ရေးပျက်ရင်လည်း အကြောဆေးထိုးကြတယ်။ ထိုးပေးဖို့လည်း တောင်းဆိုကြတယ်။ အကြောဆေးမထိုးရင်ဘဲ ရောဂါမပျောက်သလို ထင်ကြတာလဲရှိ…အကြောဆေးထိုးတာကို စွဲနေသူတွေတောင်ရှိကြပါတယ်..။
တကယ်တော့ အကြောဆေးထဲမှာ ဂလူးကို့စ်အရည်နဲ့ ဗီတာမင် ဘီ ဒါမှမဟုတ် ဗီတာမင်စီနည်းနည်းပဲပါတာပါ..။ ပုလင်း ကြီးချိတ်တယ်ဆိုတဲ့ drip ပုလင်းထဲမှာဆိုရင်တော့…. ဆေလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ ဆားငန်ရည်…. ဒါမှမဟုတ် ဆားနဲ့အချိုရော ထားတဲ့ အရည်…. ဒါမှမဟုတ် အချိုရည်ပဲပါတာပါ။ ဒီလိုဆေးသွင်းလိုက် ချိတ်လိုက်ရုံနဲ့ အားတွေရှိသွားရောလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုဏကပြောသလို အချိုရည် ဒါမှမဟုတ် ဆားငန်ရည်နဲ့ ဗီတာမင်နည်းနည်းပဲပါတဲ့အတွက် ပါ။ ပိုတဲ့ဆားငန်ရည် ဒါမှမဟုတ် အချိုရည်တွေကို သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ….. ဆီးလမ်းကြောင်းကနေ ဆီးအဖြစ် စွန့်ထုတ်ရင်း ကုန်သွားမှာပါ။
အဲဒီအစား အားဆေးသောက်ဆေးတစ်နေ့တစ်လုံးပုံမှန်သောက်တာ၊ သင့်တင့်ပြီးအာဟာရဖြစ်တဲ့အစားအသောက်တွေ စားတာက ပိုအကျိုးများစေမှာပါ။
အကြောဆေးဟာ လုံးဝ မဖြစ်မနေ မထိုးသင့်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကျတာ၊ ၀မ်းလျှောဝမ်းပျက်တာ ဒါမှမဟုတ် အန်တာများတဲ့အခါ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှူဖြစ်တဲ့အခါ၊ မီးလောင်ခံရတာမျိုးမှာ၊ ပါးစပ်ကနေဘယ်လိုမှ စားမရနိုင်တဲ့ရောဂါအခြေအနေမျိုး ဥပမာ ပါအာသီးဆိုးဆိုးဝါးဝါးယောင်ပြီးပြည်တည်နေတာမျိုး၊ အစာရေမျိုကင်ဆာမျိုး နဲ့ တချို့သောအခြေအနေတွေမှာ အကြောဆေး ကို မဖြစ်မနေသွင်းရပါတယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်အစားအသောက်နေ့စဉ်စားနိုင်နေတဲ့သူမျိုးအတွက်ကတော့ အကြောဆေးဟာ တကယ်ကို မလိုအပ်ပါဘူး။ အသားနာတာရယ်၊ ပိုက်ဆံကုန်တာရယ်၊ အချိန်ကုန်တာရယ်ပဲ ရှိပြီး ဆီးအဖြစ်နဲ့ ပြန်ထွက်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့က ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုပြီး အကြောဆေးထိုးကြပါတယ်..။ တကယ်တမ်း ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့်ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်ရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ရှာရမှာပါ။ သွေးပေါင်ချိန်တက်နေသလား၊ ကျနေသလား၊ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ပုံမှန်ရှိရဲ့လား၊ မျက်စိရောဂါကြောင့်လား၊ မိုင်ဂရိန်းလိုခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါလား၊ စိတ်ဖိစီးမှူတွေ များလို့ဖြစ်တဲ့ tension headacheလား၊ ဦးခေါင်းထဲမှာ အကြိတ် ဒါမှမဟုတ် သွေးခဲရှိနေနိုင်သလား၊ နားရောဂါကြောင့်လား၊ အာရုံကြောကြောင့်လား၊ သွေးအားနည်းသလား …. စသဖြင့် အကြောင်းအရင်းကိုရှာပြီးမှ ကုရတာပါ။ ရောဂါအလိုက် သီးခြားကုသမှူတွေရှိပါတယ်…။ ဘာဖြစ်ဖြစ် အကြောဆေးထိုးလိုက်မယ်ဆိုတာက အဖြေမဟုတ်ပါဘူး။
တခါတရံမှာ ပိုဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတောင် ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ heart failure လို့ခေါ်တဲ့ နှလုံးကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့လူနာမျိုးမှာ ၊ အဆုတ်မကောင်းတဲ့လူနာမျိုးနဲ့ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူတွေမှာ ပုလင်းကြီးကို ခပ်မြန်မြန်ချိတ်မိတဲ့အခါ အသက်အန္တရာယ်တောင်မှ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ မှာဆိုရင်လည်းပိုလို့တောင် သတိထားသင့်ပါတယ်။
တချို့လူနာတွေကျတော့လည်း… ဒီလို အကြောဆေးသွင်းတာ၊ ထိုးတာဟာ ဘာမှထူးပြီးအကျိူးမရှိတဲ့အကြောင်း သေချာဂဃနဏရှင်းပြရင်တောင် သိပ်လက်မခံချင်ကြတာမျိူးရှိပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ခဏနေရင် ဆီးထဲကနေအကုန်ပါသွားမှာသေချာနေတဲ့ အကြောဆေး သွင်းတာ ချိတ်တာဟာ မလိုအပ်ကြောင်း အားလုံးသိနားလည်လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
အဆီပိုတွေမရှိတဲ့ ပေါင်တံသွယ်လျလျလေး ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မတျ 22, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မတျ 22, 2018
အားဆေးတွေကို ဘယ်အချိန်မှာသောက်သင့်လဲ၊ အစာနဲ့တွဲသောက်ရမှာလား မသောက်ရဘူးလား။ ။
အရိုးကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် မေမေတို့ သိထားကြဖို့
ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့ သရေစာ ဘယ်လိုရှောင်ရှားစေမလဲ
ကင်ဆာရောဂါတွေရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ (၁၄)ချက်